Isidakamizwa i-Astrozone: imiyalo esetshenzisiwe > Ukwelashwa nokuvimbela
I-Arthrosan In injion - Imikhombandlela esemthethweni * Yokusetshenziswa
Umuthi uyatholakala ngesimo samathebulethi. Into esemqoka esebenza yi-pioglitazone kumthamo we-30 mg. Izinto ezingeziwe ezakha: i-lactose, i-magnesium stearate, hyprolose, croscarmellose sodium.
Amacwecwe abekwe emabhulashini agcwele izingcezu eziyi-10.
Ku-1 pack yamakhadibhodi kungaba ama-3 noma ama-6 alawa mapakheji Futhi, umuthi ungatholwa emathini wamakhompiyutha (amaphilisi angama-30 ngalinye) kanye namabhodlela afanayo (izingcezu ezingama-30).
I-Clinical microbiology ihlukanisa lesi sidakamizwa njenge-thiazolidinedione derivatives. Umuthi yi-agonist ekhethiwe ye-gamma receptors yama-isoenzymes ngamanye.
Esikhathini sikashukela i-mellitus yohlobo lwesibili, umuthi unciphisa ukumelana kwe-insulin kwamaseli wesibindi.
Zitholakala kwesibindi, izicubu kanye nezicubu ze-adipose. Ngenxa yokwenza kusebenze ama-receptors, ukubhalwa kwezakhi zofuzo lapho kunqunywa khona umuzwa we-insulin kulungiswa ngokushesha. Babandakanyeka futhi ekujuleni kwamazinga kashukela wegazi.
Izinqubo ze-metabolic ze-lipid metabolism nazo zibuyela kokujwayelekile.
Izinga lokumelana kwezicubu zomzimba liyancipha, elinomthelela ekusetshenzisweni ngokushesha kwe-glucose exhomeke nge-insulin. Kulokhu, izinga le-hemoglobin ku-serum yegazi lijwayelekile.
Esikhathini sikashukela i-mellitus yohlobo lwesibili, ukumelana kwe-insulin kwamaseli wesibindi kuncishiswa kakhulu. Lokhu kuholela ekwehlekeni kokuxineka kwe-glucose egazini, izinga le-insulini ku-plasma nalo liyancipha.
Ngemuva kokuphuza iphilisi esiswini esingenalutho, ukuqoqwa okuphelele kwe-pioglitazone ku-plasma yegazi kubonwa ngemuva kwengxenye yehora. Uma uphuza amaphilisi ngemuva kokudla, khona-ke umphumela uyatholakala emahoreni ambalwa. I-Bioavailability nokubopha kumaphrotheni egazi kuphakeme.
I-pioglitazone metabolism iyenzeka esibindini. Isigamu sempilo singamahora ayi-7. Izinto ezisebenzayo zidalulwa ngendlela yama-metabolites ayisisekelo kanye nomchamo, i-bile nezindunduma.
Izinto ezisebenzayo ze-Astrozone zivezwa ngendlela yama-metabolites ayisisekelo ngomchamo.
Ukuphulwa okuphelele kokusebenzisa umuthi yilezi:
ukuphazamiseka kwesibindi nezinso,
Kudingeka ukuqapha lapho kunqunywa umuthi kubantu abanomlando we:
ukuphazamiseka kwemisipha yenhliziyo.
Uma usebenzisa umuthi kanye namanye ama-hypoglycemic agents noma i-metformin, ukwelashwa kufanele kuqale ngomthamo omncane, i.e. ungathathi ngaphezu kwama-30 mg ngosuku.
Ukwelashwa ngokuhlangana ne-insulin kufaka ukusetshenziswa komthamo owodwa we-Astrozone ku-15-30 mg ngosuku, futhi umthamo we-insulin uhlala unjalo noma uncipha kancane, ikakhulukazi esimweni se-hypoglycemia.
Imiphumela emibi ye-Astrozone
Ibangela ukusabela okuningana okungejwayelekile, okungenzeka ngokuphuza okungafanele noma ukwephulwa kwe-dosing.
I-Astrozone ingadala ukwehluleka kwenhliziyo.
Cishe kuzo zonke izimo, iziguli zinokugcwala kwamaphethelo. Ukulimazeka okubukwayo kungahle futhi kuhlotshaniswe nokuguqulwa kwamazinga kashukela egazini, ikakhulukazi ekuqaleni kokwelashwa. Ezimweni ezingavamile, ukuthuthukiswa kokuhluleka kwenhliziyo kungenzeka.
Umthelela ekhonweni lokulawula izindlela
Ngoba ngenxa yokusetshenziswa kwalo muthi, i-hypoglycemia ingaqhamuka, ihambisana nesiyezi futhi kungabi namawala, kufanele uyeke ukushayela imoto ulawule nezinye izindlela eziyinkimbinkimbi. Lesi simo singathinta isilinganiso sokuphendula kanye nokuhlushwa.
Kufanele wenqabe ukushayela imoto ngenkathi welashwa ne-Astrozone.
Ngokuqapha, umuthi ubekelwe iziguli ezinobungozi obukhulu be-edema, kanye nokuhlinzwa (ngaphambi kokuhlinzwa okuzayo). I-Anemia ingahle ikhule (ukwehla kancane kancane kwe-hemoglobin kuvame ukuhlotshaniswa nokwenyuka kwevolumu yokujikeleza kwegazi emithanjeni).
Ukuqapha izinga le-hypoglycemia kuyadingeka lapho usebenzisa ukwelashwa ngokuhambisana ne-ketoconazole.
Sebenzisa ngesikhathi sokukhulelwa nokukhishwa komzimba
Ukuphuza amaphilisi kuyaphikiswa ngesikhathi sokukhulelwa nangesikhathi uncelisa ibele. Yize kufakazelwe ukuthi into esebenzayo ayinayo imiphumela yokuzala, kungcono ukuyeka ukwelashwa okunjalo ngesikhathi sokuhlela ukukhulelwa.
Ukuthatha amaphilisi e-Astrozone kuyaphikiswa ngesikhathi sokuncelisa ibele.
Awekho amacala okweqisa kwe-Astrozone asekhonjwe ngaphambilini. Uma ngephutha uthatha umthamo omkhulu womuthi, ukusabela okuyiphutha okuphambili okukhonjiswa ukuphazamiseka kwe-dyspeptic kanye nokukhula kwe-hypoglycemia kungakhula.
Uma kwenzeka kuba nezimpawu ezibonakaliswa ngokweqile, kuyadingeka ukwenza ukwelashwa okubonakalayo kuze kube yilapho yonke imizwa engathandeki iqedwe ngokuphelele.
Uma i-hypoglycemia iqala ukuthuthukisa, ukwelashwa i-detoxification kanye ne-hemodialysis kungadingeka.
Uma i-hypoglycemia iqala nge-overdose ye-Astrozone, i-hemodialysis ingadingeka.
Lapho isetshenziswa ngokuhlanganiswa nezindlela zokuvimbela inzalo ngomlomo, ukwehla okunamandla kwama-metabolites ento esebenzayo kuyabonakala. Ngakho-ke, ukusebenza ngempumelelo kwezindlela zokuvimbela inzalo kuyancishiswa.
Inqubo ye-pioglitazone metabolism esibindini icishe ivinjiwe ngokuphelele lapho isetshenziswa ndawonye nge-ketoconazole.
Awukwazi ukwenza umuthi ngomuthi futhi uphuze notshwala. Lokhu kungaholela emiphumeleni eyengeziwe ohlelweni lwezinzwa. Ingozi yokwanda kwe-dyspeptic phenomena iyanda. Izimpawu zokudakwa zikhula ngokushesha.
Kunezinhlobo eziningi ze-Astrozone analogues ezifanayo ngayo ngokuya ngezinto ezisebenzayo nomphumela wokwelapha:
Isikhathi sokuphelelwa yisikhathi
Akukapheli iminyaka emi-2 kusuka ngosuku lokukhonjiswa oluboniswe kuphakheji. Ungasebenzisi ngesikhathi sokuphelelwa yisikhathi.
I-analogue ye-Astrozone - isidakamizwa uPiuno asikwazi ukusetshenziswa ekugcineni kosuku lokuphelelwa yisikhathi.
1 ml ukwakheka
Ababekhona: meglumine - 3.75 mg, poloxamer 188 - 50.00 mg, tetrahydrofurfuril macrogol (glycofurol) - 100.00 mg, glycine - 5.00 mg, sodium chloride - 3.00 mg, 1 M sodium hydroxide solution - kwi-pH ka-8.2-8.9, amanzi wokujova - kufika ku-1 ml.
I-ampoule eyodwa (2,5 ml) iqukethe u-15 mg we-meloxicam.
uketshezi olucacile oluhlaza okotshani.
U-Oleg, oneminyaka engama-42, uPenza
Kudala ngihlushwa isifo sikashukela sohlobo 2. Izidakamizwa eziningi zabekwa, kepha umphumela wazo awuzange uhlale isikhathi eside njengoba besingathanda. Futhi bekungenzeki ukuthi ngenze imijovo ngaso sonke isikhathi. Futhi-ke udokotela ungeluleke ukuthi ngiphuze amaphilisi e-Astrozone. Ngizwe umphumela wabo ngokushesha okwanele. Isimo esijwayelekile sathuthuka. Amazinga kashukela wegazi abuyele kwelejwayelekile emasontweni ambalwa nje. Kulokhu, ithebhulethi engu-1 yanele usuku lonke. Ngenelisekile ngomphumela wokwelashwa.
U-Andrey, oneminyaka engama-50, uSaratov
Udokotela ubeke amaphilisi e-Astrozone ku-15 mg ngosuku ngenxa yokuthi ekuqaleni kokwelashwa bekukhona ukuhlolwa kwesibindi okubi. Kepha umthamo onjalo awuzange usize. Udokotela watusa ukwandisa umthamo waba ngu-30 mg ngosuku, owavele wanikeza umphumela osobala. Ngokusho kokuhlaziywa, inkomba ye-glucose yehlile. Umphumela uhlale isikhathi eside kuze kube yilapho umuthi ukhanseliwe. Lapho izivivinyo ziqala ukuwohloka, udokotela wanquma umthamo wokulungiswa kwe-15 mg ngosuku. Ushukela ubesephethe cishe inani elifanayo cishe unyaka manje, ngakho-ke angisho lutho olubi ngalesi sidakamizwa.
UPeter, oneminyaka engama-47, uRostov-on-Don
Umuthi awuzange uwanane. Azange ngizwe nomphumela kusuka kumthamo wokuqala we-15 mg. Ngokwemiphumela yalokhu kuhlaziya, azikho izinguquko ezikhethekile. Lapho nje umthamo ukhushulwe waba ngu-30 mg, isimo esejwayelekile saba sibi kakhulu. I-hypoglycemia enkudlwana yathuthuka, izinkomba zazo ezazivele zingincisha amandla. Kwakufanele ngibuyise umuthi.
Kukhululwa ifomu, ukwakheka
Umuthi uyatholakala ngendlela yesisombululo sokuphathwa kwe-intramuscular. Into yi-meloxicam njengengxenye esebenzayo. I-1 ml yesisombululo iqukethe i-6 mg ye-meloxicam.
Njengoba izinto ezisizayo ziyi-glycine, i-sodium hydroxide, i-glycofurol, i-sodium chloride, amanzi omjovo.
Ngenxa yomthelela wayo wokukhetha, into esebenzayo yesidakamizwa esincane inomthelela ekuthuthukisweni kwezilonda zesisu kanye ne-duodenum.
Ukuphathwa kwe-intramuscular of the drug kuvumelekile phakathi nezinsuku ezimbalwa zokuqala zokwelashwa. Ngokuzayo, kunconywa ukuguqulwa kokulawulwa komlomo kwesidakamizwa (amaphilisi).
Umthamo onconywayo nsuku zonke uvela ku-7.5 kuya ku-15 mg. Umthamo ngqo nobude besidakamizwa bunqunywa udokotela, kucatshangelwa ukubonakaliswa kwalesi sifo kanye nezimpawu zomzimba womuntu ogulayo.
Iziguli eziku-hemodialysis futhi ezinomlando wokulimala okujwayelekile kwezinso zomsebenzi kufanele zingeqi isilinganiso esikhulu sansuku zonke se-7.5 mg.
I-Arthrosan ayinconywa ukuba ixutshaniswe nesirinji efanayo nezidakamizwa kwamanye amaqembu. Ukuphathwa okuphathelene nomuthi akwenzeki.
Ukuxhumana namanye amaqembu ezidakamizwa
Lesi sidakamizwa kufanele sisetshenziswe ngokucophelela okukhulu lapho sisetshenziswa kanyekanye nezidakamizwa ezivela eqenjini lama-anticoagulants (Warfarin), ama-antiplatelet agents (Plavix, Clopidogrel), utshwala, i-corticosteroids (Prednisolone), i-Fluoxetine, neParoxetine.
I-Arthrosan akufanele isetshenziswe ngokubambisana nezinye izidakamizwa ezivela eqenjini lezidakamizwa ezingezona ezokulwa nokuvuvukala okungelona le-steroidal.
Ngokusetshenziswa ngasikhathi sinye ngama-diuretics, ubungozi bokuthola ukuhluleka kwe-renal luyanda.
Ngokusetshenziswa kanyekanye nezidakamizwa ezivela kumfutho wegazi ophakeme, umphumela wazo we-hypotensive ungancipha.
Lapho kuhlanganiswa i-Vitamin K, i-heparin, i-serotonin reuptake inhibitors, kanye ne-fibrinolytics, ubungozi bokuphuma kwegazi bukhuphuka.
Ngokuthuthuka kokuphendula komzimba okukhombisa ukwephulwa kokusebenza okujwayelekile kwezinso (ukulunywa nokuqaqanjelwa kwesikhumba, ukuhlanza, umchamo omnyama, ubuhlungu besisu), ukusetshenziswa komuthi kufanele kumiswe masinyane futhi kubonane nodokotela.
I-Arthrosan ingavala ukubonakaliswa kwezifo ezithathelwanayo.
Lo muthi awukwazi ukusetshenziswa njenge-prophylaxis ye-thrombosis, yize unamandla okwehlisa ukuhlangana kweplatelet.
Analogs of imijovo Arthrosan
Le mithi elandelayo iyizichazi zokulungiswa kwe-Arthrosan: IMelox, Amelotex, Mirlox, Mesipol, Movasin, Movalis. Uma udinga ukufaka umuthi esikhundleni sawo, kufanele uqale uthintane nodokotela wakho.
Ukugcinwa kwemijovo I-Arthrosan kufanele yenziwe endaweni emnyama, ivikelwe elangeni eliqondile, kude nezingane. Ukushisa kwesitoreji - akukho ngaphezu kwama-25 degrees.
Into esebenzayo meloxicam- okukhishwe oksikama. Inomphumela wokulwa nokuvuvukala, uvimba ukwakhekaama-prostaglantins kanye ne-enzyme chicoo oxygenase-2elibamba iqhaza kumjikelezo i-arachidonic acid.
Ngaphansi kwethonya le-meloxicam, umsebenzi abalamuli abangavuvukalanga kanye nokubakhona izindonga ze-vascularkuncishiswe kakhulu, braking kwenzeka ukusabela kwama-radicals wamahhala. I-anesthesia yenzeka ngenxa yokwehla komsebenzi wokuxhumana kwama-prostaglantins kanye izinzwa zokuphelisa izinzwa.
Ukuqina okuzinzile okuphezulu kutholakala kungakapheli izinsuku ezintathu kuya kwezihlanu. Ibopha kahle amaprotheni e-plasma (99% nangaphezulu). Kwenzelweesibindini, akha ama-metabolites ama-4. Azidlali indima ezinqubweni ze-pharmacodynamic. Ama-Metabolites adonswa emgodini nomchamo isikhathi esingaphezu kwamahora ayi-15 kuye kwangama-20.
ku-monotherapy ezigulini (ikakhulukazi labo abakhuluphele ngokweqile) abangakufinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic ngokulandela ukudla nokuzivocavoca umzimba futhi okuphathiswe abaphathi be-metformin
ngokuhlanganiswa ne-metformin ezigulini (ikakhulukazi ngokweqile) ezingafinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic ngokumelene nesizinda semithamo ephezulu evunyelwe ye-metformin,
ngokuhambisana nokususelwa kwe-sulfonylurea ezigulini ezingafinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic ngokumelene nesizinda semithamo ephezulu evunyelwe yokuphuma kwe-sulfonylurea futhi ukuphathwa kwe-metformin kuphambane nayo,
ngokuhlanganiswa ne-metformin kanye ne-sulfonylurea derivatives ezigulini (ikakhulukazi lezo ezisindwa ngokweqile) ezingafinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic ngesikhathi sokwelashwa okuhlanganiswa ne-metformin kanye nokutholwa kwe-sulfonylurea,
kuhlangene ne-insulin ezigulini ezingafinyeleli ukulawulwa kwe-glycemic ngesikhathi sokusetshenziswa kwe-insulin futhi okuphathaniswa nayo ukuphathwa kwe-metformin.
Imiyalo yokusebenzisa i-Arthrosan (Indlela nomthamo)
Amacwecwe athathwa kanye ngosuku, kanye nokudla, ahlanzwa ngamanzi. Umthamo wansuku zonke onconywayo uvela ku-7.5 mg uye ku-15 mg, ngokuya ngamandla wesifo sezinhlungu kanye nenkambo yesifo.
Uma umuthi ungeke uthathwe ngomlomoangaqoka umjovo we-intramuscular.
Imijovo ye-Arthrosan, imiyalo esetshenzisiwe
Imijovo ye-Arthrosan ibekelwa izinhlungu ezinzima ngesikhathi sezinsuku ezimbalwa zokuqala zokugula. Imijovo yezidakamizwa iyakhiqiza intramuscularlyekujuleni kwendwangu. Umthamo wansuku zonke usukela ku-7.5 kuya ku-15 mg, futhi ukwelashwa kuqalwa ngemithamo emincane futhi kukhuphuke kuze kube yilapho umphumela oyifunayo ufinyelelwa.
Musa ukweqa umthamo onconyiwe, mhlawumbe okwandisa ubungozi bemiphumela emibi.
I-Meloxicam yisidakamizwa esingeliso se-steroidal elwa nokuvuvukala (i-NSAID), sibhekisela kokuthathwa kwe-ency acid futhi kunomphumela olwa nokuvuvukala, i-analgesic ne-antipyretic. Umphumela ophikisiwe wokulwa nokuvuvukala kwe-meloxicam usungulwe kuwo wonke amamodeli ajwayelekile wokuvuvukala. Indlela yokusebenza ye-meloxicam yikhono layo lokuvimbela ukwakheka kwama-prostaglandins, abalamuli bokuvuvukala abaziwayo. Ku-vivo meloxicam kuvimbela ukwakheka kwe-prostaglandin endaweni yokuvuvukala ngezinga elikhulu kakhulu kunokuba kufana ne-mucosa noma izinso zesisu.
Lokhu kwehluka kuhlobene nokuvinjwa okukhethiwe kwe-cycloo oxygenase-2 (COX-2) kuqhathaniswa ne-cycloo oxygenase-1 (COX-1). Kukholelwa ukuthi ukuvimbela i-COX-2 kuhlinzeka ngemiphumela yokwelapha yama-NSAIDs, kuyilapho ukuvimbela kwe-COX-1 isoenzyme okukhona kungabangela imiphumela emibi esiswini nasezinso. Ukukhethwa kwe-meloxicam maqondana ne-COX-2 kuqinisekiswa ezinhlelweni ezahlukahlukene zokuhlola, ku-vitro nakwi-vivo. Amandla okukhetha we-meloxicam ukuvimbela i-COX-2 kuboniswa lapho kusetshenziswa igazi lomuntu lonke le-vitro njengohlelo lokuhlola.
Kwasungulwa ukuthi i-meloxicam (ngemithamo ye-7.5 ne-15 mg) ivimbela i-COX-2 ngenkuthalo, ifaka umthelela omkhulu ekuvinjelweni kwe-prostaglandin E2 evuselelwa yi-lipopolysaccharide (ukusabela okulawulwa yi-COX-2) kunokukhiqizwa kwe-thromboxane, ebandakanyeka ekuklameni kwegazi (ukusabela kulawulwa yi-COX-1).Le miphumela yayixhomeke kumthamo. Ucwaningo lwe-Ex vivo selukhombisile ukuthi i-meloxicam (ngamalitha ayi-7.5 mg no-15 mg) ayinawo umthelela ekuhlanganisweni kweplatelet kanye nesikhathi sokuopha.
Ezifundweni zemitholampilo, imiphumela emibi evela emgodini we-gastrointestinal (GIT) iyonke yavuka kancane lapho kuthathwa i-meloxicam 7.5 no-15 mg kunalokho lapho kuthatha amanye ama-NSAIDs lapho kwenziwa ukuqhathanisa. Lo mehluko wokuvama kwemiphumela emibi evela emgudwini wesisu ubangelwa ukuthi lapho uthatha i-melooticam, imvamisa ayibonwa kangako njenge-dyspepsia, ukugabha, isicanucanu, nobuhlungu besisu. Imvamisa yokufakelwa emgodini ongaphezulu wesisu, izilonda kanye nokopha, okwakuhambisana nokusetshenziswa kwe-meloxicam, kwakuphansi futhi kuncike kumthamo womuthi.
I-Meloxicam igxilwe ngokuphelele ngemuva kokuphathwa kwe-intramuscular. I-bioavailability ehlobene ngokuqhathaniswa ne-bioavailability yomlomo icishe ibe yi-100%. Ngakho-ke, lapho ushintsha usuka ku-injectable uye ezinhlotsheni zomlomo zokukhethwa komthamo akudingeki. Ngemuva kokuphathwa kwe-15 mg yesidakamizwa i-intramuscularly, ikhefu lokuhlushwa kwe-plasma (cishe 1.6 - 1.8 μg / ml) lifinyelelwa cishe imizuzu engama-60 - 96.
IMeloxicam ibopha kahle kakhulu amaprotheni e-plasma, ikakhulukazi nge-albhamuin (99%). Ingena ku-fluid e-synovial, ukuqoqwa okuphathelene noketshezi lwe-synovial cishe ku-50% wokuhlushwa kwe-plasma. Umthamo wokusatshalaliswa uphansi, cishe amalitha ayi-11. Ukwehluka komuntu ngamunye kungama-7-20%.
I-Meloxicam icatshangelwe ngokuphelele esibindini ngokwakhiwa kokutholwa okungu-4 okwenziwe ngamakhemikhali. I-metabolite eyinhloko, i-5-carboxy-meloxicam (60% yomthamo), yakheka i-oxidation ye-metabolite esezingeni eliphakathi, i-5-hydroxymethylmeloxicam, nayo ekhutshiwe, kepha ngezinga elincane (9% lomthamo). Ucwaningo lwe-in vitro luye lwabonisa ukuthi i-CYP2C9 isoenzyme idlala indima ebalulekile kulokhu kuguqulwa kwe-metabolic, futhi i-CYP3A4 isoenzyme idlala indima eyengeziwe. Ekwakhekeni kwamanye ama-metabolites amabili (akha, ngokulandelana, i-16% ne-4% yomthamo wesidakamizwa), i-peroxidase iyabandakanyeka, umsebenzi wawo mhlawumbe ohlukahluka ngokuhlukile. Ukuzala
Kukhishwa ngokulinganayo ngokusebenzisa amathumbu nezinso, ikakhulukazi ngesimo semetabolites. Ngefomu elingashintshiwe, ngaphansi kwe-5% yomthamo wansuku zonke udonswa indle, kumchamo ngendlela engashintshiwe, umuthi utholakala ngamanani okulandela umkhondo kuphela. Ukuqedwa okumaphakathi kwesigamu sempilo ye-meloxicam kuyahlukahluka kusuka emahoreni ayi-13 kuye kwangama-25. Amanzi we-Plasma clearance afinyelela ku-7-12 ml / min ngemuva kokusebenzisa kanye. I-Meloxicam ikhombisa i-pharmacokinetics emugqeni ngemithamo ye-7.5-15 mg ngokuphathwa kwe-intramuscular.
Ukuntuleka kwesibindi kanye / noma ukusebenza kwezinso
Ukuntuleka kokusebenza kwesibindi, kanye nokwehluleka kwezinso okuncane, akuwathinti kakhulu ama-pharmacokinetics e-meloxicam. Izinga lokuqedwa kwe-meloxicam emzimbeni liphezulu kakhulu ezigulini ezihlulekile ukulingana kwezinso. I-Meloxicam mancane amathuba okubopha amaprotheni e-plasma ezigulini ezihluleka ukwehluleka kwezinso ekugcineni. Ukwehluleka kokubulala izinso esibulalayo, ukukhuphuka kwevolumu yokusatshalaliswa kungaholela ekugxileni okuphezulu kwe-meloxicam yamahhala, ngakho-ke kulezi ziguli umthamo wansuku zonke akufanele udlule ku-7.5 mg.
Iziguli ezindala uma ziqhathaniswa neziguli ezincane zinemingcele efanayo ye-pharmacokinetic. Ezigulini esezikhulile, ukuvunyelwa kwe-plasma ngokwesilinganiso ngesikhathi sokulingana kwe-pharmacokinetics kuphansi kancane kuneziguli ezisencane. Abesifazane asebekhulile banezindinganiso eziphakeme ze-AUC (indawo engaphansi kwekhonkolo yesikhathi sokuhlushwa) nempilo ende yokuqedwa, uma kuqhathaniswa neziguli ezisezincane zombili ubulili.
I-Osteoarthritis enezinhlungu: 7.5 mg ngosuku. Uma kunesidingo, lo muthi ungakhuphukela ku-15 mg ngosuku.
Isifo samathambo: 15 mg ngosuku. Ngokuya ngomphumela wokwelapha, lo muthi ungancishiswa uye ku-7.5 mg ngosuku.
I-Ankylosing spondylitis: 15 mg ngosuku. Ngokuya ngomphumela wokwelapha, lo muthi ungancishiswa uye ku-7.5 mg ngosuku.
Ezigulini ezinobungozi obukhulu bokusabela okubi (umlando wesifo se-gastrointestinal tract, ukuba khona kwezinto eziyingozi zesifo senhliziyo), kunconyelwa ukuqala ukwelashwa ngomthamo we-7.5 mg ngosuku (bheka isigaba "Imiyalo Ekhethekile"). Ezigulini ezinokwehluleka okukhulu kwe-renal ngaphansi kwe-hemodialysis, umthamo akufanele udlule ku-7.5 mg ngosuku.
Njengoba ubungozi obukhona bokusabela okubucayi buxhomeke kumthamo nesikhathi sokulashwa, kufanele kusetshenziswe umthamo ophansi nobude besikhathi sokusetshenziswa. Umthamo ophakanyiswa nsuku zonke ongu-15 mg.
Akufanele usebenzise umuthi kanyekanye namanye ama-NSAID. Inani eliphelele lomuthi nsuku zonke lomuthi i-Arthrosan ® elisetshenziswa ngezindlela ezahlukene zemithamo akufanele lidlule i-15 mg.
Ukuphathwa kwe-intramuscular of the drug kuboniswa kuphela ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zokwelashwa. Ukwelashwa okuqhubekayo kuyaqhubeka nokusetshenziswa kwamafomu womthamo womlomo. Umthamo onconyelwayo ngu-7.5 mg noma 15 mg 1 isikhathi ngosuku, kuya ngamandla nobuhlungu obukhulu benkqubo yokuvuvukala.
Umuthi uphathwa ngokujova okujulile kwe-intramuscular.
Umuthi awukwazi ukuphathwa ngokuhlinzwa.
Njengoba kunikezwe ukungahambisani okungenzeka kwe-Arthrosan, ikhambi lokulawulwa kwe-intramuscular akufanele lihlanganiswe kwisirinji efanayo nezinye izidakamizwa.
Imiphumela emibi ichazwe ngezansi, ubudlelwane obekusetshenziswa ngabo i-meloxicam kwabhekwa njengokunokwenzeka.
Imiphumela emibi eqoshwe ngenkathi isetshenziswa ngemuva kokumaketha, ubudlelwano babo nokusetshenziswa kwe-meloxicam kwabhekwa njengokunokwenzeka, kumakwe nge-*.
Lezi zigaba ezilandelayo zisetshenziswa ngaphakathi kwamakilasi we-organic organ ngokusho imvamisa yemiphumela emibi:
kaningi (> 1/10),
imvamisa (> 1/100. 1 / 1,000. 1 / 10,000. Ukuphazanyiswa kwegazi nohlelo lwe-lymphatic:
Akuvamile - i-leukopenia, i-thrombocytopenia, izinguquko ezinanini lamaseli egazi, kufaka phakathi nezinguquko kwifomula ye-leukocyte.
Ukuphazamiseka kohlelo lokugula:
Imvamisa, ezinye izinhlobo zohlobo lwe-hypersensitivity reaction *, azitholakali - ukushaqeka kwe-anaphylactic *, ukusabela kwe-anaphylactoid. Ukuphazamiseka kwengqondo: Akuvamile - izinguquko zemood *,
Akusunguliwe - ukudideka *, ukudidiyela *. Ukuphazamiseka kusuka ohlelweni lwezinzwa: Imvamisa - ikhanda elibuhlungu, Ngokujwayelekile - isiyezi, ukozela.
Ukwephulwa kwezitho zombono, ukuzwa nokuphazamiseka kwelebhu: kaningi - i-vertigo,
Akuvamile - i-conjunctivitis *, ukulimaza okubukwayo, kufaka umbono ongaboni kahle, i-tinnitus. Ukwephulwa kwenhliziyo nemithambo yegazi:
Imvamisa - ukukhuphuka komfutho wegazi, umuzwa we- "rush" wegazi ebusweni, Kuyaqabukela - ukushaya kwenhliziyo.
Ukwephulwa kohlelo lokuphefumula:
Akuvamile - i-asthma ye-bronchial ezigulini ziguliswa yi-acetylsalicylic acid namanye ama-NSAID.
Ukwephula ipheshana le-e / emathunjini: Ngokuvamile - Ubuhlungu besisu, dyspepsia, uhudo, isicanucanu, ukuhlanza,
Kaningi - ukopha okusobala noma okusobala esiswini, i-gastritis *, i-stomatitis, ukuqunjelwa, ukuqhakaza, ukubopha, Izinga lezilonda zesisu, i-colitis, i-esophagitis, akuvamile kakhulu - ukugcotshwa kwepheshana lesisu. Ukwephulwa kwesibindi nepheshana elihlanganisiwe:
Imvamisa - ushintsho lwesikhashana kuma-indices yokusebenza kwesibindi (ngokwesibonelo, umsebenzi owandisiwe wama-transaminases noma ama-bilirubin), Akuvamile - i-hepatitis *.
Ukuphazamiseka esikhumbeni nezicubu ezithambile: Ngokujwayelekile - i-angiotek *, ukulunywa, ukuqhuma kwesikhumba,
I-necrolysis enobuthi eyejwayelekile *, iStevens-Johnson syndrome *, i-urticaria,
Kuyaqabukela - i-dermatitis enenhliziyo *, erythema multiforme *, Ayitholakali - photosensitivity.
Ukwephulwa kwezinso nepheshana lomchamo:
Ngokujwayelekile - izinguquko ezinkombeni zomsebenzi wezinso (ukukhuphuka kwe-creatinine kanye / noma i-urea esegazini legazi), ukuphazamiseka kokuchama, kufaka phakathi ukugcinwa komchamo okukudlayo *,
Akuvamile - ukwehluleka kwe-renal acute * kakhulu.
Ukwephulwa kwezitho zangasese nezindlala zezinso:
Kaningi - ukuphuma kwe-ovulation *,
Ayisungulwanga - ukungazalisi kwabesifazane *.
Ukuphazamiseka kanye nokuphazamiseka okujwayelekile endaweni yomjovo:
Imvamisa - izinhlungu nokuvuvukala endaweni yomjovo,
Ukusetshenziswa okuhlanganayo nezidakamizwa ezivimba umugqa wethambo (isb. Methotrexate) kungadala i-cytopenia.
Ukopha esiswini, isilonda, noma ukugcotshwa kungabulala.
Ngokuqondene namanye ama-NSAIDs, awafaki eceleni ukubonakala kokuvela kwe-nephritis ye-interstitial, glomerulonephritis, i-renal medullary necrosis, nephrotic syndrome.
Amanye ama-inhibitors we-syntaglandin synthesis, kufaka phakathi i-glucocorticoids nama-salicylates, ukusetshenziswa okuhambisana ne-meloxicam kukhulisa ubungozi besilonda esibelethweni esiswini nokuphuma kwegastrointestinal (ngenxa ye-synergism yesenzo). Ukusetshenziswa okubonisanayo namanye ama-NSAIDs akunconyiwe. Ama-anticoagulants wokuphathwa ngomlomo, i-heparin yokusetshenziswa okuhleliwe, ama-thrombolytic agents - ukuphathwa kanyekanye ne-meloxicam kwandisa ingozi yokopha. Uma kwenzeka ukusetshenziswa kanyekanye, ukuqapha ngokucophelela kohlelo lokuhlangana kwegazi kuyadingeka.
Izidakamizwa ze-antiplatelet, i-serotonin reuptake inhibitors, ukusetshenziswa okufana ne-meloxicam kukhulisa ubungozi bokuphuma kwegazi ngenxa yokuvinjwa komsebenzi we-platelet. Uma kwenzeka ukusetshenziswa kanyekanye, ukuqapha ngokucophelela kohlelo lokuhlangana kwegazi kuyadingeka.
Ukulungiswa kweLithium - Ama-NSAID akhuphula izinga le-lithiamu ku-plasma ngokunciphisa ukuphuma kwalo ngezinso. Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-meloxicam enamalungiselelo we-lithium akunconywa. Uma kunesidingo, ukusetshenziswa kanyekanye kokuqapha ngokucophelela okucashile kokuhlushwa kwe-lithium ku-plasma phakathi nayo yonke inkathi yamalungiselelo we-lithium.
I-Methotrexate - ama-NSAID anciphisa ukugcinwa kwe-methotrexate yizinso, ngaleyo ndlela andise ukuqina kwayo ku-plasma. Ukusetshenziswa kanyekanye kwe-meloxicam ne-methotrexate (ngethamo elingaphezu kwama-15 mg ngeviki) akunconyiwe. Uma kwenzeka ukusetshenziswa kanyekanye, ukuqapha ngokucophelela ukusebenza kwezinso nokubalwa kwegazi kuyadingeka. I-Meloxicam ingakhuphula ubuthi be-hematologic ye-methotrexate, ikakhulukazi kwiziguli ezinenkinga yokusebenza kwe-renal.
Ukuvimbela inzalo - kunobufakazi bokuthi ama-NSAIDs anganciphisa ukusebenza kwamadivayisi we-intrauterine, kepha lokhu akukaze kufakazelwe.
I-Diuretics - ukusetshenziswa kwama-NSAIDs uma kwenzeka ukuphuma komzimba kweziguli kuhambisana nengozi yokwehluleka kwe-renal reute.
Ama-antihypertensive agents (ama-beta-blockers, ama-angiotensin-aguqula ama-enzyme inhibitors, ama-vasodilators, ama-diuretics). Ama-NSAIDs anciphisa umphumela wezidakamizwa ze-antihypertensive, ngenxa yokuvinjwa kwama-prostaglandins anezakhiwo ze-vasodilating.
I-Angiotensin II receptor antagonists, kanye ne-angiotensin-converting enzyme inhibitors uma isetshenziswa ndawonye ne-NSAIDs, ikhulisa ukuncipha kokuhlunga kwe-glomerular, okungaholela ekukhuleni kwehluleke kakhulu kwe-renal, ikakhulu ezigulini ezinomsebenzi wezinso ongasebenzi.
I-Colestyramine, ebopha i-meloxicam emgodini we-gastrointestinal, iholela ekuphumeni kwayo ngokushesha.
I-Pemetrexed - ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-meloxicam kanye ne-pemetrexed ezigulini ezinikezwe ukusuka ku-45 kuye ku-79 ml / min, i-meloxicam kufanele ichithwe ezinsukwini ezinhlanu ngaphambi kokuqala kwe-pemetrexed futhi ingahle iqale kabusha ezinsukwini ezi-2 ngemuva kokuphela komthamo. Uma kunesidingo sokusetshenziswa okuhlanganisiwe kwe-meloxicam ne-pemetrexed, khona-ke iziguli ezinjengalezi kufanele zibhekwe kakhulu, ikakhulukazi maqondana ne-myelosuppression kanye nokuvela kwemiphumela emibi evela emgodini wesisu. Ezigulini ezinikezwe imvume ye-creatinine engaphansi kwama-45 ml / min, ukuthatha i-meloxicam kuhlangene ne-pemetrexed akunconywa.
Ama-NSAIDs, asebenza kuma-renal prostaglandins, angakhulisa i-cyclosporin nephrotoxicity.
Lapho isetshenziswa ngokubambisana nezidakamizwa ze-meloxicam ezinamandla okwazi ukuvimba i-CYP 2C9 kanye / noma i-CYP ZA4 (noma zivunyelaniswa nalawa ma-enzyme), njenge-sulfonylureas noma i-probenecid, kungenzeka ukuthi kubhekwe ukusebenzisana kwe-pharmacokinetic. Lapho kuhlanganiswa nama-antidiabetic agents wokuphathwa komlomo (ngokwesibonelo, okuphuma ku-sulfonylurea, nateglinide), ukusebenzisana okuqondiswe yi-CYP 2C9 kungenzeka, okungaholela ekwandeni kokuhlushwa kwale mishanguzo kanye ne-meloxicam egazini. Iziguli ezithatha i-meloxicam nge-sulfonylurea noma i-nateglinide kufanele ziqaphe ushukela wazo wegazi ngenxa yokuthi kungenzeka i-hypoglycemia.
Ngokusetshenziswa kanyekanye kwama-antacid, i-cimetidine, i-digoxin ne-furosemide, akukho ukusebenzisana okubalulekile kwe-pharmacokinetic okutholakele.
Imijovo ene-Arthrosan isetshenziswa kuphela ezinsukwini ezimbalwa zokuqala zokwelashwa kanye ngosuku, ku-7.5 noma ku-15 ml, ngemuva kwalokho ukwelashwa kuqhubeke ngamathebhulethi. Ngenxa yobungozi bemiphumela emibi, kunconywa ukusebenzisa umuthi okungenani ngemithamo esebenza ngempumelelo. Imijovo ne-Arthrosan kufanele iphathwe kuphela nge-intramuscularly futhi ayikhuthazwanga ukuxubanisa umuthi ku-syringe eyodwa nezinye izidakamizwa.
Amaphilisi e-Arthrosan athathwa kanye ngosuku, mhlawumbe ngokudla. Umthamo omkhulu wansuku zonke yi-15 mg. Imithamo incike kulesi sifo:
Nge-osteoarthrosis, thatha ithebhulethi eyodwa ye-Artrozan 7.5 mg, uma ungekho umphumela, umthamo ungaphindwa kabili,
Umthamo wansuku zonke ophakanyisiwe we-rheumatoid arthritis ngu-15 mg, ngemuva kokuthuthuka, umthamo ungancishiswa uye ku-7.5 mg ngosuku,
Nge-ankylosing spondylitis, thatha ithebhulethi eyodwa ye-Arthrosan 15 mg ngosuku.
Ngokwemiyalo ye-Arthrosan, uma kwenzeka kuba ne-overdose, i-epigastric pain, ukwazi ukungasebenzi kahle, isicanucanu, ukuboshwa kokuphefumula, ukugabha, i-acute renal kanye nokwehluleka kwe-hepatic, i-asystole kungenzeka.
Ukuqapha kufanele kusetshenziswe ngenkathi usebenzisa i-Arthrosan ngezidakamizwa ze-antihypertensive, i-methotrexate, i-diuretics, i-cyclosporine, amalungiselelo we-lithium kanye nezinye izidakamizwa. Ingozi yokopha evela emgodini wesisu ikhuphuka ngokusetshenziswa kanyekanye kwe-Arthrosan nezinye izidakamizwa ezingezona ze-steroidal ezilwa nokuvuvukala, kufaka phakathi i-acetylsalicylic acid.
I-Arthrosan isetshenziswa ngokuqapha uma kwenzeka izilonda eziwohlokayo nezilonda zephephabhuku esiswini ku-anamnesis nasekukhuleni.
Ukubuyekezwa mayelana ne-Arthrosan
Ukubuyekezwa ngomjovo we-Arthrosan kuhle. Umuthi awubizi futhi usebenza ngempumelelo. Abaningi basiza ukubhekana nobuhlungu nezifo ezahlukahlukene ezihlanganayo. Ukuphuza amaphilisi kunomthelela ofanayo nemijovo. Kuma-minus, imiphumela emibi ibonwa ngendlela yezinhlungu zekhanda, izinhlungu zesisu nesiyezi, kepha lokhu kwenzeka kaningi.